Iindaba - Intengiso yePlexiglass iyanda
Intengiso yePlexiglass iyanda
Sula iphepha le-acrylic
Iphepha lombala we-acrylic
Cacisa iAcrylic Mirror
I-Plexiglass yinto eshushu ngesiquphe, njengoko isidingo sokuphambuka ekuhlaleni kunye nokukhuselwa kuye kwanda. Oko kwakuthetha ukuphakama okukhulu kwishishini kumthengisi we-acrylic plexiglass.
Ukukhawuleza kweefowuni kwaqala phakathi ku-Matshi. Njengobhubhane we-coronavirus otshayela ngokukhawuleza kwihlabathi liphela, izibhedlele bezidinga kakhulu izikhuselo zobuso zokuzikhusela, iindawo zoluntu zifuna umqobo wokukhusela ekuhlaleni okanye izahlulelo ezikhuselayo. Ke imarike yajika yaya kumenzi wephepha le-thermoplastic, izinto ezifana neglasi ezifunekayo kwimveliso yamakhaka obuso kunye nezithintelo zokhuselo.
Imfuno yamakhaka obuso anokuhlengahlengisa ukuphela konyaka, kodwa asiqinisekanga ukuba imakethi ekhulayo yezithintelo ze-acrylic iya kwehla nanini na kungekudala. Ukongeza kwimfuno evela kwiindawo zokutyela, abathengisi kunye neeofisi ezivula kancinci, iimeko zokusebenzisa ngakumbi kunye nabathengi abanomdla bayaqhubeka nokuvela njengeshishini ngakumbi okanye imisebenzi yokuhlangana, isampulu enye njengoko kuchaziwe ngezantsi:
“Iglasi ye-Acyclic efakwe kwipalamente yaseburhulumenteni eJamani- Ngethuba lokuqala okoko kwaqala ingxaki ye-coronavirus eJamani, iPalamente yase-North-Rhine Westphalia yahlangana kwiseshoni epheleleyo. Ukugcina umgama ekuhlaleni amagqwetha angama-240 ahlukaniswe ngeebhokisi zeglasi ze-acyclic. ”
Njengomvelisi osemgangathweni wezona zinto zibalaseleyo kwizinto ze-acrylic (PMMA) e-China, i-DHUA yafumana ii-odolo zokucacisa ii-acrylic barrier sheet ezazifakwa ngaphakathi. Okuyintloko abathengi babedinga amaphepha afakelweyo phakathi kwabahlawuli kunye nabathengi, kwaye amashishini amaninzi alandela ngokukhawuleza. Ngoku njengezinye iiplexiglass ezenziweyo, i-DHUA ivelisa imiqobo ecacileyo efakwe phakathi kweminquba kunye neetafile kwiivenkile zokutyela, izahlulo ezaphukayo ukwahlula abaqhubi kubakhweli abakhwela kunye "nezikhululo zokuthintela" ukuba abaqeshi bathathe ngokukhuselekileyo amaqondo obushushu abasebenzi ekuqaleni kweeshifti. Iimveliso sele zingenile zangena kubathengisi, kumagumbi ezinkundla, kwiithiyetha zemidlalo bhanyabhanya, ezikolweni nakwiiofisi ezisebenza kwiindawo.